Waraaq cusub ee Capacitor-ka Macdanta-Macdanta ayaa la xareeyay horraantii Janaayo 2020
Capacitor AC Filter
Kaydinta Tamarta / Xaraashka Awooda
Capacitor kululaynta Induction
Maamulayaasha Nidaamka Tamarta Cusboonaysiinta
Awood Beddelka Awoodaha
Shaandhaynta Awoodda Firfircoon
Awoodaha Awooda Korantada
Nidaamka korantada tareenka
Awoodaha kululaynta tamarta
Qodista Awoodda Macdanta
Siideynta Kooxda | Wuxi, Shiinaha | Juun 11, 2020
Bishii Janaayo 03, 2020, Wuxi CRE New Energy Technology Co., Ltd waxay sameysay codsi codsi ah si ay ugu xareyso rukhsad cusub ee filinka awoodda leh ee DC-Link ee loo adeegsaday walxaha qarxa ee caddaynta isku-dhafka ah ee miinooyinka dhuxusha. (Lambarka Patent-ka: 2019222133634)
Wuxi, Jiangsu (Juun 11, 2020) - In kasta oo loo adeegsado beddelka macdanta soo noqnoqodka ee macdanta ayaa aad ugu dhowaan markii la barbar dhigo kuwa ka jira meelaha kale, baahida suuqa ayaa cirka isku shareertay 5-tii sano ee la soo dhaafay. Kordhinta isbeddelka soo noqnoqda ee loogu talagalay macdanta ayaa inta badan sabab u ah qalabka elektiroonigga ee waqtigiisu dhammaaday oo aan buuxin baahiyaha wax soo saarka warshadaha.
Aaladaha duugoobay waxay leeyihiin cabir weyn, hufnaan yar, adeegsiga tamarta weyn, kaarboonka hawada oo yaraa iyo karti-u-helidda waxyaabaha qarxa ee deegaanka shaqada adag. Intaa waxaa u dheer, waxay qabsadaan meel ballaaran oo shaqada ah waxayna had iyo jeer u baahan yihiin nidaamka kontoroolka elektaroonigga ah iyo nidaamka cadaadiska saliidda. Marka la barbardhigo, beddelka isku-dhafka ah ee isku-dhafan waa mid yar oo cabbir ah oo badbaadinaya goob shaqo oo tixgelin leh. Kuma xirna nidaamyada kale inay sidoo kale u shaqeeyaan. Ilo koronto iyo fiilo ayaa ah waxa ay u baahan tahay oo dhan si ay u qabato.
Sidaa darteed, awood qaas ah oo filim qaas ah loogu talagalay soo-celinta isku-darka macdanta isku-dhafan ee buuxisa shuruudaha aan kor ku soo xusnay ayaa door muhiim ah leh. Caadi ahaan, koronto-sidaha loo yaqaan 'DC-Link capacitor' oo loo adeegsaday walxaha isku-dhafan ee isku-dhafan ee is-beddelka qodista macdanta wuxuu ku xirayaa heerar badan oo filinka ah oo taxane ah ama isbarbar socda, mid kasta oo ay ku jiraan baakad alwaax leh. Qaacidadan ayaa cad wali waxay ubaahantahay cabir balaaran oo balaaran iyo goob shaqo oo balaaran, ayadoon lagaranaynin cilad ku timaada gaadiidka soo noqnoqda culeyskiisa culus awgeed.
Bixinta xalka lagu kalsoonaan karo iyo tayada ayaa had iyo jeer ah ahmiyada ugu sareysa ee Wuxi CRE tamar cusub. Si loo xalliyo cilad-darrooyinkaan farsamo ee keenay habka dhaqameed ee aan kor ku soo xusnay, CRE New Energy waxay soo saartay awood filimo cusub oo DC-Link metelaysa oo si gaar ah loogu talagalay is-beddelka isku-dhafka ah ee isku-darka ujeedooyinka macdanta dhuxusha.
Gudaha, waxay kuxiridaa laba xirmooyin tamarta oo ka kooban hal qolofle iyo kuwa iibiya tamarta loo yaqaan 'capacitor bobbins' qaab dhismeedka baska kaasoo si weyn hoos ugu dhigaya cabirka guud. Sidoo kale, fiilooyinka korontada ee loo yaqaan 'capacitor cores' waxaa dabeyshaqeeyaa filim polypropylene metalliyeer ah oo ay kujirto qalabka korantada ee loo yaqaan 'capacitor electrodes' iyo dielectric filimka polypropylene Qalabka elektaroniga ah waa lakab aluminium oo lagu daboolay filimka polypropylene-ka vacuum-gashan ee vacuum-ka ah. Tiknoolajiyadda dabayl-celinta filimka metrik waxay kordhineysaa caabbinta korantada 'capacitors cores' ee kulka korantada sare iyo tan hadda jirta, waxay yareysaa kuleylka la soo saaray, waxay kordhisaa rajooyinka nolosha waxayna yareysaa cabirka xitaa ka sii fog. Dibad ahaan ahaan, waxaan dalbanay fikradda naqshada guriga si loo yareeyo tirada moodalka jirka.
Bishii Janaayo 03, 2020, Wuxi CRE New Energy Technology Co., Ltd waxay sameysay codsi codsi ah si ay ugu xareysato rukhsad filimkan cusub ee metelaya filinka loo isticmaalo aaladaha-macdanta isku-dhafka ah ee isku-beddelka macdanta isku-dhafan (Patent Number: 2019222133634). Waqtigan xaadirka ah, CRE New Energy waxay leedahay 20 aalado wax ku ool ah, 6 shati oo ay kujiraan hanaan xaqiijin oo ay weheliso kan cusub. Qaar kaloo badan ayaa la filayaa inay raacaan mustaqbalka fog. Waan ballan qaadaynaa, oo annagana waannu samatabbixin doonnaa.
Wixii su'aalo dheeri ah,
fadlan la xiriir maamulahayaga iibka, Li Dong (Liv), dongli@cre-elec.com
Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan patent-kan cusub,
fadlan booqo http://cpquery.sipo.gov.cn/ ama http://www.sipop.cn/module/gate/homePage.html oo raadi lambarka patent 2019222133634 ama magaca shirkadda "无锡 宸 瑞 新 能源 科技 有限公司". Illaa taariikhda maqaalka, sharraxaadda faahfaahsan ee shati-tarkan weli umay helin dadweynaha oo waa la marin karaa ka dib marka la maro habraaca xaqiijinta ee mustaqbalka dhow. Waxaad toos ula soo xiriiri kartaa si aan ugala hadalno waxyaabo dheeraad ah. Waan ka raali galineynaa qalalaasaha waxaan kugu mahadcelineynaa danahaaga.
Waqtiga boostada: Jun-18-2020
CRE NEW ENERGY Ayaa Ka Qaybgalay 14-kii (2020) SNEC ...
Oggolaansho Cusub oo loogu talagalay Kaaliyaha Macdanta la Xiriira ...
Wuxi CRE New Technology Technology Co., Ltd.
Telefoon: 0086 18362396881
Cinwaanka: Dhismaha D, No.789 Aagga NanHu, Degmada Liangxi, Magaalada Wuxi, Gobolka Jiangsu, Shiinaha 214000
Xuquuqda daabacaadda - 2010-2022: Dhammaan Xuquuqda Aad ayaa Leedahay.